Abagwebi 13 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Baphinda oonyanaoonyana bakaSirayeli benza ububiububi emehlweni kaYehova. UYehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka emashumi mane.
3 Kwabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi lowo, sathi kuye, YabonaYabona, uludlolo wena, akuzali; ke uya kumitha, uzaleuzale unyanaunyana.
5 Ngokuba uyabona, uya kumitha, uzaleuzale unyanaunyana; isitshetshe sokucheba asiyi kusondezwa entlokweni yakhe; ngokuba le nkwenkwe iya kuba ngumahlulwa kaThixo kwasesizalweni. Yiyo ke eya kuqala ukuwasindisa amaSirayeli esandleni samaFilisti.
6 WezaWeza lo mfazimfazi, wathi kwindoda yakhe, Kufike kum umntu kaThixo, imbonakalo yakhe injengembonakalo yesithunywa sikaThixo, isoyikeka kunene; kodwa andimbuzanga apho avela khona, naye akandixelelanga igamaigama lakhe.
7 Wathi kum, UyabonaUyabona, uya kumitha, uzaleuzale unyanaunyana; ke ngoko uze ungaseli wayini nasiselo sinxilisayo, ungadli nanye into eyinqambi; ngokuba le nkwenkwe iya kuba ngumahlulwa kaThixo, kwasesizalweni, kude kube ngumhla wokufa kwayo.
8 Wathandaza ke uManowa kuYehova, wathi, Camagu, NkosiNkosi yam; umntu kaThixo owamthumayo makakhe abuye eze kuthi, asifundise ukuba simthini na umntwana oya kuzalwa.
9 Waliphulaphula uThixouThixo izwi likaManowa; sabuya seza ke isithunywa sikaYehova kumfazi lowo ehleli entsimini, uManowa indoda yakhe ingenaye.
10 Wakhawuleza umfazi, wagidima, wayixelela indodaindoda yakhe, wathi kuyo, YabonaYabona, ubonakele kum laa mntu ubeze kum laa mhla.
14 Maze angadli nto iphuma emdiliyeni, angaseli wayini nasiselo sinxilisayo, angadli nanye into eyinqambi. Konke endimwisele umthethoumthetho ngako makakugcine.
17 Wathi uManowa kwisithunywa sikaYehova, Ungubani na igamaigama; sikuzukise lakwenzeka ilizwi lakho?
18 Sathi kuye isithunywa sikaYehova, Yini na le nto ulibuzayo igamaigama lam, libalulekile nje?
21 Asaba saphinda sibonakale isithunywa sikaYehova kuManowa nomkakhe. Wandula ukwaziukwazi uManowa ukuba sisithunywa sikaYehova esi.
22 Wathi uManowa kumkakhe, Siya kufa ngenene, ngokuba simbonile uThixouThixo.
24 WazalaWazala unyanaunyana umfazi lowo, wathi igamaigama lakhe nguSamsonnguSamson. Yakhula ke inkwenkweinkwenkwe leyo, uYehova wayisikelela.
25 Waqala uMoyauMoya kaYehova wamqhuba eseMahane-dandan, phakathi kweTsora ne-Eshtawoli.
Exploring the Meaning of Abagwebi 13